वर्णन मिडिया कांग्रेसका अग्रज नेता एवं पूर्व राज्यमन्त्री दूर्योधन सिंह थारु चौधरीको निधन - वर्णन मिडिया
नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीका अग्रज नेता एवं पूर्व राज्यमन्त्री ७० वर्षीय दूर्योधन सिंह थारु चौधरीको निधन भएकाे छ ।
वुटवल स्थित गौतम वुद्ध सामुदायिक मुट अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनकाे निधन भएकाे हाे ।
स्वर्गीय चौधरी २०४८, २०५१ र २०५६ को आमनिर्वाचनमा रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।
स्वर्गीय चौधरी स्थानीय विकास राज्य मन्त्री, आपूर्ति सहायक मन्त्री र महिला तथा सामाजकल्याण सहायक मन्त्री समेत भएका थिए ।
स्वर्गीय चौधरीले वि.सं. २०२८ सालमा भारतको वनारसबाट राजनीतिक जीवन यात्रा प्रारम्भ गरेका थिए । उनका दुई श्रीमती, तीन छोरा र एक छोरी छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उहाँको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन् । एक शाेक बिज्ञप्ति जारी गर्दै उनले दुःख व्यक्त गरेका हुन् । उनले बिज्ञप्तिमा अग्रज नेता एवं पूर्व राज्यमन्त्री दूर्योधन सिंह थारु चौधरीको निधनको खबरले मलाई अत्यन्त दुःखीत बनाएको बताएका छन् ।
स्वर्गीय चौधरीले नेपाली कांग्रेसको संगठन र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेकाे देउवाले बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
देउवाले उनको निधनले पार्टीले एक अग्रज व्यक्तित्वलाई गुमाएको र अपूरणीय क्षति पुगेको बताएका छन् ।
देउवाले बिज्ञप्ति मार्फत उनको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् । सभापति देउवाले उनको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै सम्पूर्ण शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति पार्टी र देउवाकाे व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक समवेदना व्यक्त गरेका छन् ।
ढिस्कोले पुरिएर एक जनाको मृत्यु
चाइना फाउण्डेसनद्वारा राहत वितरण
गण्डक कोभिड अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार सुरु
गुल्मीका ४१ वर्षीय कोरोना संक्रमितको मृत्यु : कोरोनाकाे कारण मृत्यु हुनेकाे संख्या ३ पुग्याे